Ahiahy valifaty :: Mpivady samy voatifitra sady voatapa-tenda tany an-tsaha • AoRaha
Ahiahy valifaty Mpivady samy voatifitra sady voatapa-tenda tany an-tsaha
Tsy nananan’ireo olon-dratsy antra ny fanaperana ny ain’ireto mpivady, tany Tanambao Tsaratanàna, afak’omaly maraina. Voalaza fa samy notifirina saingy mbola voatapa-tenda ihany koa izy mivady ireo.
«Nidiran’ny bala teo amin’ ny tratrany tandrify ny fony ilay lehilahy. Notifirina teo amin’ny taovam-pananahany kosa ilay vehivavy», hoy ny mpitandro filaminana nanao ny fizahana ny razana, tany an-toerana.
Teny an-dalana hikarakara fambolena eny an-tsaha izy mivady ireto no niharan’ny vono, tamin’io maraina io. Fantatra fa lehiben’ny « Dina » na fikambanana misahana ny fampandriana fahalemana any Tsaratanàna ny raim-pianakaviana, izay manodidina ny dimy amby telopolo taona.
Ahiana, hatreto, fa vokatry ny valifaty amin’io andraikitra sahaniny io, no antony namono- ana ho faty azy mivady.Nandrasan’ireo andian-jiolahy manodidina ny dimy lahy teo amin’ny alaala rakotra ahitra lava izy mivady. Mangingina ny toerana satria efa any amin’ny iray kilaometatra miala ny tanàna. «Nisy ankizilahy niandry omby tsy lavitra teo. Henony ny poa-basy. Tazany ihany koa, avy eo, ny nanapahan’ireo olon-dratsy ny tendan’izy mivady. Io mpi- andry omby io no nihazakazaka nampandre ny teto an-tanàna. Efa tsy tratra teo intsony ireo jiolahy. Nalain’izy ireo ny basim-borona iray teny amin’ ireo voatafika», araka ny fanazavana voaray tamin’ny mpitandro filaminana hatrany.
Nambaran’iretsy farany fa fantapantatra ny momba- momba an’ireo olon-dratsy. Voalaza fa iray tanàna sy naman’ ilay lehilahy efa malaza ratsy amin’ny fanafihana mitam-piadiana sy fanaovana fakàna an-keriny any amin’iny faritra Betsiboka iny, antsoina hoe Del Kely, ihany no namono an’ireo mpivady ireo.
Lozam-piarakodia Naratra ny zandary iray sy olona efatra tokony hiakatra Fitsarana
Fifandonana :: Loakan’ny bala ny lamosin’ ny zandary iray
Vokatry ny fanohizana ny fikarohana :: Tratra ny iray tamin’ireo nahafaty lehilahy Karàna